यसरी परे असन्तुष्टीको भूमरीमा गृहमन्त्री बादल
जनतापाटी २४ भाद्र ।
काठमाडाै‌ । वामपन्थी नेतृत्वमा दुई तिहाई प्राप्त सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पछिल्लो पटक व्यक्तिगत रुपमा आलोचना केन्द्रित भएको छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको स्वभाविक परिकल्पना स्थायी सरकार हो । सरकारले के गर्यो के गरेन भन्ने गुण र दोषको जिम्मेवारी मुख्य त सरकार प्रमुखककै हो । तथापी पछिल्लो पटक एक व्यक्तिको जसरी बाहिरभित्रबाट आक्रमण भएको छ यसको भित्री कथा मजाककै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारकाे नेतृत्व गरेपछिको ६ महिने उपलब्धिलाई जसरी सार्वजनिक गरियो त्यो त्यही व्यक्तिका कारण भएका छन् । जो काम गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’बाट भएका छन् । तर, त्यसको चौतर्फी आलोचना र मन्त्री फेरबदलमा गृहमन्त्री बादल पहिलो नम्बरमा भन्ने चर्चा बढि भए । प्रचार जसरी गरियो त्यसै गरी स्वभाविक रुपमा अड्कल मिडिया र एकथरी समुदायमा पर्नु स्वभाविकै हो ।
यातायातको सिन्डिकेटको अन्त्य, विकासका काम समयमा पुरा नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कार्वाही, वर्षौदेखि निरन्तर रहेको सुन तस्करीको जालो ध्वस्त, सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोगमा रोक, एनजीओ, आइएनजीओ सञ्चालकहरुको सम्पत्ति छानबिन जस्ता कार्यमा बादलले हात हाले । जसले जनतामा एउटा सकारात्मक रक्तसंचार गरायो । जसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको उपलब्धिका रुपमा ‘सुशासनको मानक थालनी’ भनेर प्रचार प्रसार पनि गरे । जसरी ती कामहरु प्रचार भयो कार्यन्वयनको पाटोबाट भने उपलब्धि भएनन् ।
गृहमन्त्री बादलको पहिलो कदम यातायात सिन्डिकेट हटाउन सफल भयो । तर त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवार मन्त्रिबाट भएन । दोस्रो, ३९ क्वीन्टल भन्दा बढि सुन तस्करी गरिसकेका तस्करको समूह छिन्नभिन्न बनाए । त्यसमध्ये धेरैको ३३ किलो सुन खोइ भन्नेमा मात्र ध्यान गयो । त्यसअघिका गृहमन्त्रीहरुले ३९ क्वीन्टल सुन तस्करीहरुलाई कसरी संरक्षण गरेका रहेछन भन्ने कसैले प्रश्न गर्न सकेनन् । बरु ३३ किलो सुन कहाँ गयो भनेर त्यसको जवाफ गृहमन्त्री बादलले दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई उचाल्न खोजियो । सुन तस्करहरुको ‘ठूला माछा’ छेउछाउँ पुग्दा छानबिन समितिको ब्रेक लाग्यो ।
साँच्चिकै बादल गर्जिने हो भने मेघगर्जन सहितको त्यो झरीले कसलाई कहाँ पुर्याउला ? त्यो जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राम्ररी थाहा छ । नेकपा (नेकपा) अध्यक्ष प्रचण्ड थप जानकार छन् । गृहमन्त्रीको सचिवालय ठीक भएन भनेर बाहिर आलोचित बनेका सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ले आफ्नो प्रष्टीकरणमा भनेका छन् ‘सुन तस्करीको अन्तिम दोषी पक्राउ नपर्दासम्म अभियान रोकिन्न’ । पार्टीमा बैचारिक नेताका रुपमा चिनिएका ‘पथिक’को प्रष्टीकरणले गृहमन्त्रीले गर्न खोजेका काम कसरी रोकिएका रहेछन् भन्ने विषयलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जब देशका एनजिओ, आइएनजियो सञ्चालकहरुको सम्पत्ति सुद्धिकरण गर्न परिपत्र गरियो गृहमन्त्रालयबाट तब एनजीओ, आईएनजीओमा राम्ररी पकड भएका पूर्व एमाले नेता कार्यकर्ता बादलप्रति नकारात्मक धारणा बनाउँदै गए ।
सेवाग्रहीको सुविधाका लागि केही समुदायगत चाडपर्वको विदा कटौती गर्यो सरकारले । तर, त्यसको आरोप समेत गृहमन्त्री बादलले खेप्नु पर्यो । आदिवासी जनजाति कुलका भएकाले बादललाई उनीहरुको चाडपर्वको बिदा कटौती गरेकाले आलोचना खेप्नु पर्यो । यता जनैपूर्णिमा, कृष्णजन्मअस्टमी जस्ता सांस्कृतिक दिनको विदा कटौती गर्दा ठूलो संख्यामा रहेका मध्यमवर्गीय हिन्दूवादी समुदायको मर्ममा चोट पर्यो ।
त्यो निर्णय सरकारले गर्यो । तर, आलोचना गृहमन्त्रीले नै खानु पर्यो । सम्बृद्ध नेपालका लागि शान्ति आवश्यक भएको सरकारले भनिरहेको छ । शान्ति, अमनचयनका लागि विप्लव नेतृत्वका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दा समेत बादलले नै आलोचना खानु परेको छ । हिजो माओवादी हिंसात्मक गतिबिधिबाट आयो भन्ने पक्ष नै अहिले पूर्व सहकर्मी भएकाले बादलले विप्लवप्रति नरम हुनुपर्छ भनेर रोइलो मच्चाएका छन् ।
किन बादललाई सरकारबाट हटाउने हल्ला चल्यो ?
‘आफ्नो झोलीको मुख बलियो नकसरी अरुलाई चोरको आरोप लगाउनु गलत हुन्छ’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै भयो यसपटक बादलमाथिको आक्रमण । समाजमा हत्या, हिंसा, अपहरण, बलत्कार जस्ता घट्ना अलिक बढि भए । जसलाई नियन्त्रण गृहमन्त्रालयले नै गर्ने हो । कतिपय ती घट्नाहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालय गृह भएकाले कमिकमजोरीको जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ । यद्यपी गृहमन्त्री ‘असक्षम’ भए भनेर प्रचारबाजी गरेर मन्त्री फेरबदल भनियो यसभित्रको जड् अर्कैछ ।
गृहमन्त्री बादलको नकारात्मक रिर्पोटिगं प्रचण्डसँग भए । मन्त्री फेरवदल गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डसँग राम्रै लबिगं भयो । पार्टी एकता भए पनि यो या त्यो अर्थमा दुई धार प्रष्टैछ । पूर्व माओवादी पक्षबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बादलले परिवर्तनको आशमा रहेका जनतामा जसरी सकारात्मक रुपमा रक्तसंचार गराए । त्यसलाई बाहिरी रुपमा राम्रो भन्ने तर, बादल स्थापित नेतृत्वको रुपमा देखिन्छ भन्ने संसय पार्टीभित्रै पैदा भयो ।
माओवादी पक्षबाट पार्टी एकता प्रक्रियामा दोस्रो लिडर बादल नै हुन । भलै प्राविधिक रुपमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई लिइएको छ । भावी प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट चहानाले जसरी वामदेब गौतम डोल्पामा चुनाव लड्न जाने तरखरमा छन् । त्यो पूर्व एमाले पक्षधरबाट । आदिवासी जनजाति समुदाय र पूर्व माओवादी पक्षधरबाट जर्वजस्त भावी प्रधानमन्त्री भए बादल बन्न सक्छन भन्ने सबैलाई छर्लङ्गैै छ । जुन कुरा बाहिरी, भित्री कसैलाई पचेको छैन ।
त्यही मनोविज्ञानले मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी, पत्रकार, ठेकेदार, अधिकारकर्मी र पार्टीभित्रका एकथरीलाई पचेको छैन । त्यसको अभिव्यक्ति अहिले सतहमा पोखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार एक कार्यक्रममा मन्त्री फेरबदल नहुने बताएका छन् । जसले धेरै मिडिया र मध्यमवर्गी बुज्रकहरुको अडकलबाजी समाप्त भएको छ ।
यद्यपी मन्त्री हटाउन परे पनि प्रचण्डले आफू पछिको नेताका रुपमा स्थापित बादललाई फेर्ने हिम्मत गरेर रिक्स मोल्ने मनस्थितिमा नरहेको प्रचण्ड निकट स्रोतहरु बताउँछन । तर, एक चल्तिको अनलाइन र पूर्व माओवादी तर्फबाट गृहमन्त्री हुन खोजेका तर, नभएका मन्त्रीको प्रेस संयोजकले सञ्चालन गरेको अनलाईनमा एउटै भाषा, शैलीमा गृहमन्त्रीको आलोचना गरिएको लामा आलेख आए । जसबाट पुष्टि हुन्छ, त्यो एउटा मिशन थियो । आफ्नै पक्षबाट मन्त्री भएका पहिले गृहमन्त्री हुन नपाएको ईगोमा प्रचारबाजी गरियो भन्ने सबैलाई प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसको केही दिनमा ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ जस्तै कागताली पर्यो । नेपालमा म्यागेजिन पत्रकारिता अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत दुई ‘मूलधार’का साप्ताहिक मार्फत बादलविरुद्ध एकसाथ आक्रमण भयो । यसको भित्रीकथा हेर्दा एक साताभित्र एकै शैलीमा दुई अनलाईन र साप्ताहिक म्यागेजिनमा किन लेखियो ? भन्ने सबैले सहजै अनुमान गर्न सक्छ ।
डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणमा बादलको हात छ भनेर समाजमा चुकेका नारायण वाग्लेले नेतृत्व गरेका ‘नेपाल साप्ताकि’ र लेनिन विष्टलाई ‘बाल सैन्य’ बनाएर थाइल्याण्ड पठाउने प्रोजेक्ट संचालकबाट सञ्चालित ‘हिमाल साप्ताहिक’ गृहमन्त्री विरुद्ध उत्रिए । यो स्वभाविक हो । वाग्लेले पहिले नेपाली पत्रकारितामा गलत सूचना प्रवाह गरेर समाजमा गिरेको आफ्नो शिर उचो बनाउने ध्यायउन्नमा छन् ।
यता बादलले भने जस्तै एनजीओ, आइएनजीओ सञ्चालकहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने भनेपछि स्वतः कणकमणि दिक्षितहरु पहिलो नम्बरमा पर्ने छन् । ब्रिटिश दूताबासबाट सहयोग लिई सञ्चालित खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके)बाट रकम लिई मिशनका रुपमा खोजिने स्टोरीहरु हिमालले छाप्ने गर्छ । गजबको सेटिगं कस्तो छ भने खोपकेमा सम्पादक हिमालका पूर्व सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले छन् । मिशन कम्पिलिट गर्न गाउँलेलाई नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्तिमा अफर गर्दा समेत गएनन् ।
सम्पादकीय समेत उनीहरुकै सल्लाहले लेखेर प्रकाशन हुने हिमाल व्यवसायिक भन्दा मिशनकारितामा देखिन्छ । बढि पूर्व माओवादी निकटका विरुद्धमा । अहिले त्यसैको घानमा बादल पुनः परेका छन् ।
सबै असन्तुष्ट, गृहमन्त्रीले के गर्ने ?
संक्रमणकालिको उतारको योबेला वामपन्थी सरकारले केही प्रगतिशील काम गर्नै पर्ने अवस्था देखिएको छ । जहाँबाट शुरु गर्नुपर्ने हो त्यहाँ केही चल्तिका घेराबन्दी गर्ने वर्ग छ । अहिले जे जति कोकोहोलो मच्चिएको छ त्यसैको प्रतिउत्पादक हो । बादल गृहमन्त्रीका रुपमा सकेपछि समाजमा देखिने भाइरसहरुलाई उन्मूलन गर्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
गुण्डागर्दी, हप्ताअसुली, दुव्र्यशनी र डन प्रवृत्तिको उन्मूलनमा लाग्दा उनीहरुको सञ्जाल सत्ता सञ्चालक दलभित्रै खुलेआम देखिए । एक गुन्डा नाइकेलाई प्रधानमन्त्री ओलीको कभरमा सांसद नविना लामाले छुटाएको घट्ना कसैबाट छिपेको छैन । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री दोषी भन्न खोजिएको होइन । सत्ताका वरपर रहने पुरानै प्रवृत्तिले गृहमन्त्रीलाई बाधाअड्चन गरेको देखिन्छ ।
गृहमन्त्रीले केही जनपक्षीय कामको थालनी गरे । तर, निचोड्मा पुर्याउन सकेका छैनन् । अहिले धेरैको गुणासो सचिवालयप्रति छ । यो त सानो अंश मात्रै हो । जब, पार्टी र सरकार नेतृत्व पंक्ति नै असन्तुष्ट देखिन्छ भने नेता, कार्यकर्ता हुँदै जनता असन्तुष्टि हुनु स्भाविकै हो । सरकारले भने जस्तो गरेन भनेर दुई अध्यक्षबीच समिक्षा बैठक हुन्छ । झलनाथ खनाल वरिष्ठबाट घटुवा भएँ भनेर असुन्तष्ट छन । माधव नेपालको आफ्ना पुराना गुटबाट समायोजनमा नेतृत्व पाइएन भनेर गुनासो छ । पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठ राजिनामा दिएर बसेका छन् । जनवर्गी संगठनहरु समायोजन हुन सकेका छैनन् । अनि कहाँबाट शुरु गर्ने सुन्तुष्ट हुने काम ?
बरु चौतर्फी गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय ठीक भएन भनेर आलोचना खेपिरहेका पथिकले स्वीकारे जसरी सबैले स्वीकार्ने कि ? कमिकमजोरी! पथिकले भनेका छन – ‘यसबीच अनुभवको कमी, गलत सूचना, अनावश्यक दवावका बीच काम गर्दा कतिपय सीमा, कमी कमजोरी रहेका छन् । गृहप्रशासन सञ्चालनको अनुभवको कमीले पनि केही कमी देखापरे । समयसँगै विस्तारै गृहमन्त्रालय परिपक्क बन्दै गएको छ ।’
जुनियर फुटबल क्याम्पबाट नेल्शन र श्रीयान्स छनोट
राष्ट्रप्रमुखको सवारीका लागि आकाश ५७ मिनेट खाली गराइयो